20 kamid ah musharixiinta isu diiwaangelisay Madaxweynaha 10aad JFS oo maanta khudbado u jeedinaya BFS | dayniiile.com
Home WARKII 20 kamid ah musharixiinta isu diiwaangelisay Madaxweynaha 10aad JFS oo maanta khudbado...
20 kamid ah musharixiinta isu diiwaangelisay Madaxweynaha 10aad JFS oo maanta khudbado u jeedinaya BFS
20 kamid ah Musharixiinta isu diiwaangelisay Xilka Madaxweynaha 10aad JFS ayaa maanta khudbadda ay ugu talagaleen in ay kusoo jiitaan Xildhibaannada iyo Senatarada u codeynaya ka jeedinaya Teendhada Afisiyooni.
Musharax weliba waxaa la siiyay 15 daqiiqo oo uu kusoo jeedinayo sooyaalkiisa, waxyaabaha lagu dooranayo iyo ballanqaadyada siyaasiyiinta ay sameeyeen waqtiyada Doorashada ay galayaan.
Guddiga isku dhafka ah ee labada Gole Baarlamaanka Federaalka u qaabilsan Doorashada Madaxweynaha 10aad ayaa musharixiinta ka dalbaday in ay ilaaliyaan waqtiga la siiyay si ay ugu soo koobaan hadal jeedintooda.
Xildhibaan Maxamed Ibraahim (Macalimu) oo xubin ka ah Guddiga Doorashada Madaxweynaha 10aad JFS oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in musharax weliba laga rabo in uu raaco habraaca loogu talagalay isla markaana uu ilaaliyo waqtiga la siiyay.
“Waxaa billaabaneysa hadal jeedinta musharixiinta oo ka dhaceysa teendhada Afisiyooni, musharax weliba waxaa loo qorsheeyay 15 Daqiiqo, qof weliba waa in uu ilaaliyaa waqtiga uu ku qoran yahay, waxaana aad u muhiim ah oo qof weliba lagula xisaabtamayaa waqtigaas” Xildhibaan Macalimu oo xubin ka ah Guddiga Doorashada Madaxweynaha JFS.
Previous articleMARWADII HORE EE QARANKA XAAWO CABDI SAMATAR OO GEERIYOOTAY
Next articleCiidamada Israa’iil oo toogasho ku dilay suxufiyad ka tirsaneyd TV-ga Al-jazeera
Kooxo hubeysan oo labo qof oo isku qoys ah ku dilay...